Deeq ka timid Dowlada Turkiga oo lagu wareejiyay XFS Soomaaliya - Awdinle Online
Deeq ka timid Dowlada Turkiga oo lagu wareejiyay XFS Soomaaliya
Shirjaraaid oo ay si wadajir ah Muqdisho ugu qabteen Wasiirada Arrimaha dibadda, Gargaarka iyo Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya iyo Danjiraha Turkiga waxa ku faah-faahiyeen gurmad ka yimid Dowladda Turkiga.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka XFS Fawsiya Abiikar Nuur ayaa Dowladda iyo Shacabka Turkiga ugu mahad celisay garab istaagooda Soomaaliya oo ku jirta xaalad ay kaga hortageyso wax ka qabashada Cudurka Coronavirus.
Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka XFS Xamsa Saciid Xamsa ayaa dhankiisa ka hadlay daadadka iyo fatahaadda wabiga, waxaana uu sheegay in dadaal kala duwan ay waddo Dowladda Soomaaliya oo wax looga qabanayo.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaaz ayaa dhankiisa sheegay Dowladdooda ay garab taagan tahay Soomaaliya, isaga oo tilmaamay in cudurka Covid-19 uu dhibaato weyn ka geystay Caalamka.
Danjire Mehmet ayaa sheegay in uusan jirin dal u diyaarsan kahor tagga iyo wax ka qabashada cudurka Coronavirus, balse dadaalo iskaashi ku dhisan ay socdaan, si loosoo afjaro xannuunkaan oo isaga gudbay dalal iyo qaarado.
“Dowladda Turkiga waxaa ka go’an garabsiinta Soomaaliya si loosoo afjaro musiibooyinka, waana tan keentay in gurmad aan keenno si wax loogu qabto dadka u baahan, baahida ugu weyn waa daboolista duruufaha iyo helista qalabka ku filan sida Kan Hawada ama neefta dadka siiya, agabka ay isticmaalayaan howlwadeenada” ayuu yiri Mehmet Yilmaz.
Danjire Yilmaz ayaa sheegay in maalmaha soo socda gurmad kale ay keenayaan Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay si gaar ah ay u wado agabka loogu baahi badan yahay sida Sariiraha, qalabka afka iyo sanka lagu xirto, Mashiinka dadka neefta siiya, kaalmadaan ayuu ku tilmaamay in si gaar ah ay ugu timid Madaxweyne Erdogan.
Previous articleMareykanka oo ugu dambeyn ku dhawaaqay daawadda ugu haboon ee loo isticmaalo Corona Virus
Next articleMamulka Puntland oo war kasoo saaray xalada magalada Qardho